Emulsification Factory - China Emulsification Abakhiqizi nabaphakeli
imishini yokukhiqiza izimonyo ze-ultrasonic
Sebenzisa i-solvent eluhlaza: amanzi.
Cwilisa izinhlayiya zibe izinhlayiya ze-nano.
Hlanganisa ngokugcwele izithako ezahlukahlukene futhi uthuthukise ukusebenza kokhilimu.
I-Biodiesel uhlobo lukaphethiloli kadizili othathwe ezitshalweni noma ezilwaneni futhi oqukethe ama-ester e-fatty chain esters amade. Ngokuvamile yenziwa ngama-lipids asabela ngamakhemikhali njengamafutha ezilwane (i-tallow), uwoyela wesoya, noma omunye uwoyela wemifino notshwala, okhiqiza i-methyl, ethyl noma i-propyl ester. Imishini yokukhiqiza yendabuko ye-biodiesel ingacutshungulwa kuphela ngamaqoqo, okuholela ekusebenzeni okuphansi kakhulu kokukhiqiza. Ngenxa yokwengezwa kwama-emulsifiers amaningi, isivuno kanye nekhwalithi ye-biodiesel ...
Isisetshenziswa se-Ultrasonic emulsification se-biodiesel
IBiodiesel iyinhlanganisela yamafutha yemifino (njengobhontshisi kanye nembewu ye-sunflower) noma amafutha ezilwane notshwala. Empeleni inqubo yokuguqula umzimba. Izinyathelo zokukhiqiza zeBiodiesel: 1. Hlanganisa uwoyela wemifino noma amafutha ezilwane ne-methanol noma i-ethanol ne-sodium methoxide noma i-hydroxide. 2. Ukushisa ngogesi uketshezi oluxubile lube ngu-45 ~ 65 degrees Celsius. 3. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic ketshezi elixutshiwe elifudumele. 4. Sebenzisa i-centrifuge ukuhlukanisa i-glycerin ukuthola i-biodiesel. Imininingwane: IMODEL JH1500W-20 JH20 ...